Tag: asa fanaovan-gazety | Martech Zone
Isan'andro aho dia mahazo kianja am-polony ao anaty boaty. Betsaka amin'izy ireo no tsy dia voasoratra firy, ny ankamaroany dia tsy misy ifandraisany amin'ny tranokalako, saingy misy volamena foana ao anaty antontam-spam PR noho izany dia mandinika aho. Nahazo pitch aho tamin'ity herinandro ity izay nisehoan'ilay mailaka somary hafa kely ary nanome traikefa tsara ho ahy. Tiako ity fotoana ity hampahafantatra ny orinasam-pifandraisana amin'ny faran'ny hafa
Zoma, Septambra 13, 2013 Zoma, Septambra 13, 2013 Douglas Karr
Ity dia mety ho iray amin'ireo hetsika mampatahotra indrindra atahorana ny fahalalahana miteny sy ny mpanao gazety malalaka eto amin'ity firenena ity. Ny Senat dia nandany lalàna momba ny fiarovana amin'ny haino aman-jery izay mamaritra ny fanaovan-gazety ary ny kilasin'ny mpanao gazety voaaro ihany no tafiditra amin'ireo hetsika fanangonana vaovao ara-dalàna. Raha jerena amin'ny tongotra 10,000, dia toa hevitra tsara ilay volavolan-dalàna. Ny LA Times dia niantso azy io ho "Volavolan-dalàna hiarovana ny mpanao gazety". Ny olana dia ny fiteny ifotony